Articles publiés dans “Malagasy”
Kolontsaina – Aseho amin’ny alalan’ny fampirantiana ny sanganasan-dRamily
« RAMILY ILAY NANAO NY MARAINA ». Io no lohahevitra amin’ity hetsika fampirantiana sary ity. Izany hoe, ny zavatra nataon-dRamily dia iainana amin’izao ary ankafizina ankehitriny. Hita taratra ao anatin’ny sariny izay hampirantiana…
Sosialy – Napetraka ny paikady ho fanatsarana ny toeram-ponenana tsizarizary an-tanan-dehibe
Publié avril 30, 2022 par Book News
Anisan’ny firenena marefo amin’ny fiovan’ny toetrandro i Madagasikara. Miakatra ny maripana, mikorontana ny toetrandro, mihamafy ny fiantraikan’ireo loza voajanahary. Ho fiatrehana izany, misy ny atrikasa entina handravonana sy hankatoavana ireo…
« Malagasy miaina ao anaty Madagasikara tsara tantana, marina ary miroborobo », io no vinan’ny hetsika Rohy ho an’ny taona 2022-2026. Novelabelarin’izy ireo ny 7 avrily 2022 ny mikasika ny drafitra vaovao…